भोजन संस्कार : खाना पछि किन खाने गुलियो ? | सुदुरपश्चिम खबर
भोजन संस्कार : खाना पछि किन खाने गुलियो ?
प्राचीन समयदेखि नै मानिसहरूले आफ्नो खानामा ध्यान दिँदै आएको पाइन्छ । चिकित्सा शास्त्रहरुले तोके अनुसार पहिलेदेखि नै कुन समयमा कति मात्रामा खाना खाने भन्ने बारेमा पूर्खाहरु समेत निकै सचेत रहेको पाइन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरुको खाना खाने विधि र प्रक्रिया आफ्नै किसिमको हुन्छ । जुनसुकै भाषा र धर्मका लागि लेखिएको शास्त्रले पनि यस विषयमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबारेमा हिन्दु धर्मशास्त्र र आयुर्वेदमा पनि राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ ।
प्रायः हामीहरु खाना खानु अघि वा खानाको समयमा धेरै पिरो खान्छौं र खाना पछि धेरै गुलियो खानेकुरा खाने गर्छों । तर, थोरै व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि खाना खानु अघि मसलेदार खाना खाने वा गुलियो खानेकुरा खाने ? अझ नियमित यसरी खाना खानेलाई पनि किन खाना पछि गुलियो खानेकुरा खाने भन्नेबारे जानकारी नहुनसक्छ ।
खाना खानु अघि किन खाने पिरो ?
खाना खानुभन्दा पहिले पिरो खानेकुरा खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । किनभने यसले तपाईंको पाचन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन मद्दत गर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार हामीले पिरो खानेकुरा खाँदा शरीरबाट पाचन रस र अम्ल निस्कन्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाट पाचन प्रणाली ठिकसँग चलिरहेको छ या छैन भन्ने यकीन समेत गर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेद शास्त्रहरुका अनुसार सुरुमा मसलेदार खाना खाइसकेपछि पाचन तत्व र एसिडहरू पेटमा सक्रिय हुन्छन् । जसको कारण पाचन प्रणाली तेज हुनेगर्छ । खानाको सुरुमा मसलेदार खानाले पेटको जठराग्नी बढाउने गर्छ । जसले भोकलाई जगाउने काम गर्छ ।
खाना पछि गुलियो खाना खानुको फाइदा
खानाको अन्तिममा हामीले गुलियो खाना खाने गर्छौं । कार्बोहाइड्रेड गुलियो खानेकुरामा धेरै पाइन्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई सुस्त गराउने गर्छ । त्यसैले खाना पकाएपछि गुलियो खाना खाने गरिन्छ । अर्कोतर्फ, मिठाईहरू खाँदा सेरोटोनिन नामको हर्मोनको स्तर बढ्छ । यसले न्यूरो ट्रान्समिटरको रूपमा काम गर्दछ । जसले हामीलाई खुशीको अनुभव गराउन मद्दत गर्छ । वास्तवमा, मिठाई खानाले एमिनो एसिड ट्रिप्टोफानको शोषण बढाउँछ । ट्रिप्टोफानले सेरोटोनिनको स्तर बढाउने काम गर्छ । सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रान्समिटर हो । जुन खुशीको अनुभूतिसँग सम्बन्धित छ ।
कुनैपनि समयमा भारी खाना खाएपछि हाइपोग्लाइसीमियाको अवस्थाबाट गुज्रनुपर्छ । यस अवस्थामा रक्तचापमा उल्लेखनीय कमी आउँछ । यो अवस्थाबाट बच्न खाना पछि गुलियो खानेकुरा खान सल्लाह दिन्छन् चिकित्सकहरु ।
आयुर्वेदका अनुसार खानापछि गुलियो खानेकुरा खानाले एसिडको तीव्रतामा कमी आउँछ । जसले पेटमा जलन वा एसिडिटी हुँदैन । मिठाईको रुपमा कहिलैपनि सेतो चिनी मात्रै खानु हुँदैन । यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसबाट तयार पारिएको अरु मिठाईहरु समेत सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । यसले मोटोपना र अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरु निम्त्याउन सक्छ । यसको सट्टामा सख्खर वा खुदो खाने गर्नुपर्छ । बरु खैरो रंगको चिनी स्वास्थ्यको लागि कम हानिकारक हुन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
दार्चुला जिल्लामा भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु
बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा एकल महिलालाई बाख्रा वितरण